Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
musha FOOTBALL MANAGER Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane March 10, 2019
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rezita "Muurayi-Akatarisana Nemhondi". Our Ole Gunnar Solskjear Childhood Story plus Untold Biography Facts anounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu musati mazita, kusimudzira mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hungu, munhu wese anoziva kuti ari pakati pevanhu vanozivikanwa vemu Old Trafford's Hall of Fame. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezveOle Gunnar Solskjear's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Ole Gunnar Solskjaer akaberekwa musi we 26th waFebruary 1973 kuna amai vake, Brita Solskjaer nababa, Oivind Solskjaer muWest Coast yeNorway. Pasi pane vabereki vanozvikudza vokuNorway vokuOle Gunnar.
Mutambi akaberekerwa mumhuri yemitambo uye mhuri yakaderera. Akakurira muguta duku rechitsuwa cheKristiansund muEast Norway. Maererano neManchester Evening News, baba vake vaiva Greco-Roman wrestler uyo akakurudzira Norway kwemakore mashanu.
Cherechedza: Kurwisana neGirisi neRoma inzira ye mutsimba iyo inorambidza akabata pasi pechiuno uye inopikisirwa pamarudzi ose eElimpiki yezhizha yakachengetwa kubvira 1908. Baba vaSolskjaer Oivind akanga ari weNorway Kwete 1 Grecia neRoma mauto makuru pakati pe1966-71. Pakutanga, yakanga iri tariro yaSolskjaer wepamusoro yokuti mwana wake aizotevera mumakwara ake.
Zvinosuruvarisa, Wrestling yakanga yakanyanya kuoma nokuda kweAre semwana. Akaedza mutambo kwemakore matatu asi chimiro chake chisina kusimba chakamupikisa sezvaaishusha kuti aedze kutevedzera zvakaitwa nababa vake. Pamusana pechipfupa chake chiduku, duku Solskjaer yakanyatsotsinhirwa kune vezera rake.
Vose vabereki vaiva netsitsi kune mwanakomana wavo uyo akazotumidza zita rokuti "Tiny Ole". Vaivenga apo aigara achikandwa pasi uye akapihwa pasi nevashori. Sezvo vaine zvakakwana, Brita naOivind vakasimbisa mwana wavo vanofanira kusiya mitambo. Izvi zvakaona kuguma kusuruvara kwezera rekurwa.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Buildup
Kunze kwekukwikwidza, Ole aiva nerudo, iyo ibhora. Akatovata nebhora usiku humwe, asi haaigona kuzviita.
Nzira yeBritain yeBritain yakaratidza sei kusava nehanya nechishuvo chake cheScot:
Kushandisa nguva yakareba kuti utarise terevhizheni kwakamubvumira kudanana nematambo ebhora. Kunyanya pakati pavo kwaiva Mugovera BBC Match of the Day iyo yakazununguka kuvaNorwegi, iyo yakakurumbira mutsva webhokisi kubva kuEngland.
Uyewo, mapurogiramu eBritain emagetsi semutambo weChirungu yeMutambo, Shoot uye Match Weekly akatumirwa kuNorway panguva iyoyo.
"Ndaiwanyorera pasi mapepa ose ebati uye maitiro kubva kuMatch of the Day. Pane imwe nguva, ndinofanira kuziva zvose nezvebhora muEngland, " akati Ole ane rudo rwekutanga aive Liverpool (Taurai zvinyoro!)
Mushure mokunge vatarisa bhora paTV, chii chakazotevera chaiva musikana wechidiki Solskjaer akarova bhora musingagumi pajecha uye munharaunda pedyo neimba yake. Hazvina kutora nguva iyo vabereki vake vasati vamukurudzira kuita sarudzo pamusoro pemutambo wake wachangobva kuwana.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga Upenyu
Kuzvitsaurira kwaSolskjaer uye tarenda mutsva akamuona paaiva nemakore 8 akanyorera kambani yekambani yeClausengen yaro sechidiki. Clausengen yaiva kambani duku muguta racho raizivikanwa pakuita kuti vana vawane mukurumbira mukuru nekuda kwemaitiro avo ekugadzira matarenda. Mushure mekunge apinda mubato, pakanga pane makuhwa kuti aisazoita nekuda kwehukuru hwake.
Nenzira yakanaka, nechepakati pemakore ekuyaruka makore, Solskjaer akatanga kupfura zvisizvo uye akaisa kuyerwa. Akava mukuru uye akasimba asi zvakange zvisina kunaka zvakakwana kuti ajoane nemakuru makuru kunyange sezvaakakwidziridzwa kuenda kumutambo mukuru. Kunyangwe paiva nemapoka uye vanhu vaida kutamba mutambo uye kumutora.
Mumwe munhu anozivikanwa aimbova mudziviriri weManchester City Aage Hareide uyo akawedzera kufarira muna Ole uye akanga asingadi kumuendesa kuchikwata chikuru. Mushure mekutsvaga 31 yeClusengen's 47 vavariro mune imwe nguva yemasangano, Hareide (akafananidzirwa pasi apa) aifanira kudhinda mabhodzi ekutora tarenda yake duku.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Kuonga Aage Hareide, Ole mu1995 akazviendesa kuMolde, boka guru reNorway rinonzi Aage Hareide rakapinda.
Pachikwata, akaenderera mberi nekukurira sechinangwa chakakura muNorway Premier League. Chakavanzika cheOle chaiva basa rake rakaoma uye kukwanisa kushanda kunze kwechikwata ichiita padziviriro. Iyi yakanga iri nguva, yaive nechinangwa chekubudirira pazvose zvinodhura. Solskjær akawanawo chido chikuru pamusoro peEngland.
Zvinosuruvarisa kuna Hareide, akanga asina Solskjaer achitungamirira kurwisa kwake kwenguva refu. Kuverenga zvikwangwani zve 31 mumakwikwi e38 zvakakwezva vatambi veMuganhu veMuganhu avo vakamupoteredza seva shark- pakati pavo United.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Pashure pokukundikana kuwana Alan Shearer, Man United paC29 July 1996 akasarudza kuwana Ole Gunner Solskjear uyo akanga ari panguva iyoyo asingazivi kunze kwenyika yake.
Nemine mitambo miduku chete yakatamba, yakava pachena kune vatsva kuti United yakachengetedza imwe yezvakanakisisa mumigariro yekambani. Solskjaer yakaguma kuongorora 18 Premier League zvinangwa zveUnited mumwaka wake wokutanga.
Nguva yakakura yeNorway ndiyo yaakaenda kunyoresa chinangwa chekugadzirisa-nguva yekukunda Bayern Munich mumugumo we1999 UEFA Champions League. Ichi ndicho chinangwa chakabatsira United kuchengetedza Treble uye zvechokwadi, uyo akaisa zita rake muimba yekambani yekurumbira rwezita.
Mutambi wekufa ari kupedzisa pamwe chete nehucheche hwake hwemucheche anotarisa akaita kuti mabhizimisi eBritish amutumidze kuti "Mucheche-akasangana neAassassin".
Zvisinei, nheyo yeMunhu United inoda kuyeukwa se "super-sub". Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Paaiva achitamba United, Solskjaer aigara muBramhall nemudzimai wake akanaka ainzi Silje.
Vose vakaroorana vakaropafadzwa nevana vatatu; Noa, Karna naEria.
Mwana weSolkkjaeri Noa akareurura kune vepepanhau kuti baba vake vakanga vasingadi mutambi wake. Kare kumashure, Noa anoda kutsigira Wayne Rooney panzvimbo yebaba vake.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwehupenyu hwaOle Gunnar Solskjear huchakubatsira kuwana mufananidzo wakakwana wake. Paunofunga nezveNorway nyika yake, zvichida fungidzira vhudzi rakachena, nzvimbo dzakanaka, hove dzakawanda uye HERE HERE Hondo. Waizviziva here? Solskjaer akambosangana negore rekumanikidzirwa kwebasa rinomanikidzwa iro rakavamba panguva yaaiva nemakore e19.
Muna 2008, Solskjaer akava muNorway muduku kudarika Kutanga Chikoro Knighthood yeRorwegian Norwegian Order yeSt. Olav naMambo Harald V wokuNorway.
Solskjaer aiva pvakatsamwa nemupiro mumutambo we 25 October 2008 mudhorobha rake reKristiansund. Solskjaer ndiye mudiki kudarika akambogamuchira we knighthood, kazhinji anopiwa nhengo dzinokosha dzevanhu mumakore avo akazotevera.
Solskaer akagara ku Old Trafford kunyange zvazvo mamwe makirasi akaratidza kufarira kwaari zvikurukuru mu1998. Solskjaer pasinei nokuti ave mubatsiri wakaramba zvipo zvose pasinei neManchester United kunyange kugamuchira zvigadzirwa zvemhemberero.
Chimwe chinotsanangura nguva muhupenyu hwake ndechekuti paakaita unyanzvi husemesa zvose muzita rekumisa mukana wepikicha wechiratidzo. Solskjaer akaita izvi achiziva kuti aizowana kadhi tsvuku. Vafambi veBhola vakaona izvi semuenzaniso wakajeka wekuti Solskjaer akaisa sei klabhu pamusoro pezvaanoda.
Ole Gunnar Solskjear Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts- Untold Career Fact
Anobata British Record:
Pana 2 August 2008, manzwiro testimonial match pakati peMunited United neEspanyol yakadanwa mukukudza Solskjær ku Old Trafford. Iyo mutsara wekunetseka yakanyorwa zvevaFanki vema69,000 vemazuva ano uye vakagadzira rekodi sechipiri-akakwirira-vakapinda mushumo wokupupurira muBritain.
Coaching Career Summary:
Waizviziva here? Solskjaer akatanga kudzidzisa kunyange zvazvo ari mutambi weUnited. Kare kare panguva yezhizha, Solskjaer aizodzokera kuNorway kuti azove mudzidzisi kuStatoil Academy, chikoro chezhizha chevechidiki vaduku venyika. Mushure mokurega basa, Solskjaer akamboramba mukana wekutarisira Norway, achiti "nekukurumidza'.
Semudzidzisi, Solskjaer akakunda mutauro weNorway munguva yake yokutanga yeMolde mu2011. Akakundawo marwendo mana semutungamiriri weUnited reserves iyo Jesse Lingard naPauro Pogba vaimiririra.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinoonga nekuverenga Ole Gunnar Solskjear Childhood Story pamwe neSepold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako
Julian Nagelsmann Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Quique Setien Yevechidiki Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Chris Wilder Nyaya dzeChikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
Freddie Ljungberg Childhood Nhau Untold Biography Chokwadi
Brendan Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Ernesto Valverde Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Thomas Tuchel Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Massimiliano Allegri Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Nuno Espirito Santo Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Maurizio Sarri Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: June 28, 2020
Odsonne Edouard Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakagadziridzwa zuva: June 15, 2020
Gareth Southgate Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kurume 28, 2018
Frank Lampard Nhoroondo yeChidiki Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 1, 2019
Mauricio Pochettino Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 18, 2017
Yakagadziridzwa zuva: Kukadzi 12, 2019